स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिभर हात हतियार लिएर हिड्न प्रतिबन्ध ! – ebaglung.com
स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिभर हात हतियार लिएर हिड्न प्रतिबन्ध !
२०७४ बैशाख ६, बुधबार १३:४४	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
महेन्द्र केसी पर्वत २०७४ बैशाख ६ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले आगामी बैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको अवधिभर सुरक्षा कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले बाहेक अन्य कुनैपनि व्यक्तिले हात हतियार लिएर हिड्न प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार कुनै प्रकारको विष्फोटक पदार्थ वा रासायनिक वा विषालु पदार्थ, लाठी, भाला, खुकुरी, बन्दुक, पेस्तोल वा त्यस्तै प्रकारका अन्य हातहतियार लिएर हिँडडुल गर्न, प्रदर्शन गर्न वा प्रयोग गर्न गराउन पूर्णतः निषेध गरिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रविण ढकालले प्रतिबन्धित गतिविधि भए गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही हुने जानकारी दिए ।
साथै कार्यालयले जारी गरेको सूचना अनुसार मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको अवैध उत्पादन तथा बिक्री वितरण कार्यमा समेत पूर्ण बन्देज गरिएको हुँदा त्यस्ता कार्य नगर्न÷नगराउन सचेत गराएको छ । कार्यालयको सूचना विपरित भए गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही गरिने सप्रजिअ ढकालले बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रनाउ शेखर खनालका अनुसार निर्वाचनका बेला हुने अपराधिक घटना नियन्त्रण र घटना संलग्नको पहिचानका लागि सादा पोशाकका पनि प्रहरी परिचालन गरिएको छ । विशेष गरि जिल्लाका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाका बजार क्षेत्रमा प्रहरी निगरानी बढाइएको र सम्भावित घटना हुनसक्ने क्षेत्रमा प्रहरीलाई २४ घण्टा नै निगरानीमा राखिएको बताईएको छ ।
बागलुङमा दुई दिनमा तीन जनाव्दारा आत्महत्या !
कलाकार शाहीको मोटरसाईकल दुर्घटनामा मृत्यु !